Orinasa fanatobiana rano sy rano Rotary Retort any Shina | Dingtaisheng
Ataovy ao anaty retort sterilization ny vokatra, ny varingarina dia voafintina tsirairay ary manidy ny varavarana. Ny varavarana mamaly dia azo antoka amin'ny alàlan'ny fifandimbiasan-doza telo. Mandritra ny fizotrany rehetra, mihidy mafy ny varavarana.
Fitsinjarana rano mikoriana
Mety amin'ny kaontenera mora simba
Satria manana rano mampionona ny rano, dia afaka mamorona vokany miaro tena tsara amin'ny fitoeran-javatra rehefa mihodina.
Mety amin'ny fikirakirana sakafo am-bifotsy fonosana lehibe
Tavoahangy plastika, kaopy Kitapo malefaka lehibe
＞ legioma sy voankazo
Previous: Famafazana rano sy famerenana Rotary
Manaraka: Steam sy Rotary Retort
Autoclave fanitrihana rano